Ny hafa - Viajes tanteraka | Fitsangatsanganana tanteraka (Pejy 2)
Toerana hitetezana irery
Any amin'ny kaontinanta dimy ihany no misy ny toerana fivezivezena. Manolotra toerana toa an'i Vietnam, Peru, New Zealand, Canada na Kenya izahay.
Inona no ho hita any Sénégal
Raha manontany tena ianao hoe inona no ho hitanao any Senegal, dia tokony ho fantatrao fa izy io dia iray amin'ireo firenena tsara tarehy sy mpandray olona eran'i Afrika Andrefana rehetra.
Sri Lanka, fantatra amin'ny anarana hoe the Tear of India, dia manolotra anao faritra mahafinaritra, torapasika mahatalanjona ary tsangambato taloha.
Tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa
Ny tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa dia manome anao tantara maro, tsangambato hafakely ho hitanao sy valan-javaboary mahafinaritra hankafizinao.
Inona no tokony hijerena anao manofa trano any ambanivohitra miaraka amin'ny antoka
Fantatrao ve izay tokony hojerena hanofa trano any ambanivohitra misy antoka? Eto izahay dia manome ny sasany amin'ireo torohevitra tsara tokony harahinao amin'ireto tranga ireto.
Ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane dia mamela anao hahafantatra ny tanàna lehibe any atsimon'i Eropa miaraka amin'ireo zava-mahatalanjona arkeolojika sy goavambe.
Zavatra tokony hatao any Maldives
Raha manontany tena ianao hoe inona no hatao any Maldives, dia holazainay aminao fa manana tsangambato sy gastronomie hafa izy, fa ambonin'izany rehetra izany dia ny hatsaran-tarehy voajanahary mahavariana.
Inona no ho hita any Lapland
Raha manontany tena ianao hoe inona no ho hita ao Lapland, dia holazainay aminao fa manana jiro mahafinaritra any avaratra ianao, fa manonofy ihany koa ny endrika sy ny tranon'i Santa Claus.
Mieritreritra ireo dia fitsangantsanganana an-dranomasina? Azonao atao koa izao ny mandamina ny anao. Eto izahay dia milaza aminao ny fomba sy ny fampahalalana ilaina rehetra.
Bali any Indonezia
Ny fitsangatsanganana any Bali any Indonezia dia ny fahalalana tontolo iray tsy mitovy amin'ny antsika. Fa tsidiho ihany koa ny toerana misy natiora mahafinaritra sy tsangambato tokana.
Fomban-drazana sy fomban-drazana an'ny Masais
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba amam-panao sy ny fomban'ny Masais ve ianao? Fampahalalana tena sarobidy izay milaza amintsika ny fomba fiainany.
Bruges any Belzika
Bruges of Belzika dia manana foibe manan-tantara mahafinaritra izay World Heritage Site ary manana trano tsy manam-paharoa eran'izao tontolo izao.
Helsinki dia tanàna feno tantara, tsangambato ary tranombakoka. Fa miaraka amin'ny gastronomie matsiro kokoa noho izay antenainao.
Krakow dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa. Ho hitanao ao ny lova manankarena manankarena, gastronomia tena tsara sy olona mandray.
Ny fahatongavan'ilay coronavirus teo amin'ilay sehatra dia nivadika ny planeta iray manontolo. Firenena sasany no nandalo na nilentika tao ...
Na eo aza ny zava-misy fa ny fiaramanidina no fitaovam-pitaterana ampiasain'ny ankamaroan'ny mponina, ...
Hotely hiaraka amin'ny ankizy
Fantatrao ve ny toetra rehetra sy ny hotely inona iraisan'ny ankizy? Eto izahay dia mampiseho anao handany ny fialan-tsasatry ny fianakaviana tsara indrindra
Betsaka ny mampiavaka ny hotely tsy misy zanaka tokony ho fantatrao. Te hankafy toerana tokan-tena irery ve ianao amin'ny mpivady na amin'ny namana?
Ny pejy mavo dia mitohy ho loharanom-pahalalana ho an'ny fanjakana hikarohana ny fandraisam-bahiny sy ny matihanina amin'ny karazany, avy amin'ny mpitsabo nify ...
Raha te-hanofa karajia ianao dia tsy maintsy manisy andian-dingana maromaro, mba hizorany am-pilaminana ny zava-drehetra ary hankafizanao ny fialan-tsasatrao.
Ianao ve mieritreritra ny hiala sasatra ary tsy te handany be? Soraty ireo toerana mora vidina ireo handehanana any Eropa ary hankafizanao ny fitsaharana.
Kit ho tafavoaka velona amin'ny dianao: Izay tsy azonao adino
Te-hitsangatsangana ve ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana ny valizinao? Topazo maso ireo kitapitsika velona amin'ny dianao ary aza mamela na inona na inona ao an-trano.
Wild sy untamed, ny Valan-javaboary Komodo any Indonezia dia paradisa iray malaza amin'ny fisian'ny androngo lehibe indrindra manerantany.
Tsy maintsy esorina ny fitaka rehefa manofa trano ho an'ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra ianao. Noho izany, tsy misy toa ny fanarahana andianà torohevitra vitsivitsy arosonay
Mandeha fiaramanidina miaraka amin'ny ankizy
Ny fitsangatsanganana an-tsambo miaraka amin'ny ankizy dia mety ho sarotra kokoa noho ny hieritreretantsika azy. Saingy afaka mampihatra andian-toro-hevitra fototra hatrany isika.
Inona no atao hoe surf amin'ny fandriana
Couchsurfing dia nanjary iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny dia. Fantaro hoe inona izany ary ny fiasan'izy io ankoatry ny tombony lehibe ananany.
Tsy mora foana ny mandamina fialan-tsasatra ho an'ny mpianakavy. Noho izany dia manolotra andian-dingana tokony hatao izahay. Tsotra sy azo ampiharina!
Farihy Bled: mitsidika an'i Slovenia angano
Raha mitsidika ny Lake Bled any Slovenia ianao dia hahita tontolo majika sy voajanahary mendrika ny angano eropeana tsara indrindra.
Fiantohana hitsangatsangana amin'ny ankohonanao, ny fampiononana ho an'ny fialan-tsasatrao
Safidy tsara foana ny fiantohana fitsangantsanganana ao amin'ny fianakaviana. Hanana fiadanan-tsaina isika noho ny tombony azo avy amin'ny fandrakofana.
Inona no ho hita ao amin'ny Riandranon'i Victoria
Raha mitady hamoy ny tenanao ianao amin'ny iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary eto an-tany, dia ny Victoria Falls no nahitana zavatra mahavariana indrindra.
Fitsidihana ireo tempolin'i Angkor any Kambodza
Ny fitsidihana ny tempolin'i Angkor any Kambôdza dia midika fidirana amin'ny iray amin'ireo complexe lehibe indrindra manerantany. Jereo izy ireo!
Inona no ho hita ao Sofia
Raha manontany tena ianao hoe inona no ho hita ao Sofia, izahay dia manome andian-joro sy faritra manan-danja izay tsy maintsy tsidihinao amin'ity dia lavitra tsy hay hadinoina ity.
Betsaka ny toerana itadiavana fialantsasatra am-pitiavana izay azontsika isafidianana. Nifantina ireo izay azonao vangiana amin'ny fitsangatsanganana haingana izahay.
Betsaka ny tombony azo amin'ny famandrihana dia mialoha ary tokony ho fantatrao. Ho hitanao fa amin'ity fomba ity dia afaka mankafy bebe kokoa ny fialan-tsasatrao ianao.
Mendrika hananana fiantohana fanafoanana dia ve ianao? Anio dia omenay anao ny valiny ary holazainay aminao ny momba azy sy ny fandrakofana momba azy.
Inona no ho hita any Dinant, Belzika
Androany dia mandeha mitsangatsangana amin'ilay antsoina hoe 'Zanakavavin'ny Mossa' na Dinant fantatra kokoa isika. Jereo izay ho hitanao any Dinant, Belzika, sy ireo zorony mahafinaritra.
Aza adino ity fitsangatsanganana ity amin'ny zavatra ho hitanao any Warsaw. Hankafy ireo zorony majika ireo ianao, izay mitondra anao amin'ny tantarany sy ny kolontsainy.
Towers Petronas Kuala Lumpur: Avy any amin'ny havoanan'i Malezia
Ny Petronas Towers any Kuala Lumpur dia tsy iray amin'ireo sary masina lehibe an'i Malezia fa ny fandresena aziatika tohanan'ny kolontsaina sy ny fanavaozana.
Manomboka amin'ny fotoam-pivoriana spa ka hatrany amin'ny very any amin'ireo tanàna mahafinaritra, ireo drafitra mandritra ny faran'ny herinandro ireo dia handresy anao. Nahavita azy rehetra ve ianao?
Ny morontsiraka tsara indrindra any Thailand
Safidy ny morontsiraka tsara indrindra any Thailand, izay handanianao ny andro sy ny alina tsara indrindra amin'ny fijanonanao. Tolotra malalaka ho an'ny tsiro rehetra.
Toerana hitsangatsangana amin'ny volana oktobra
Jereo hoe aiza no haleha amin'ny volana Oktobra. Toerana lavorary, misy maripana tsara sy zavatra maro ho hitanao. Aza mieritreritra indroa!
Delta Mekong: midina amin'ny faritra tropik'i Vietnam
Ny hazo voanio, tanimbary midadasika na vohitra mitsingevana dia miandry ao amin'ny Delta Mekong izay mitarika ny majika sy ny exoticism an'i Vietnam. Te hahafantatra azy ve ianao?
Ny sidina tsy misy toerana aleha, ahoana no fiasan'izy ireo?
Izahay dia mampiharihary ny tombony amin'ny sidina tsy aleha, amin'ny fotoana iray ihany dia ambaranay anao ny fomba fiasan'izy ireo sy ny toerana ahafahanao mahazo madiodio toa izany.
Raha mieritreritra ny fahazoana fahazoan-dàlana mitondra fiara iraisam-pirenena ianao, dia asehonay anao ny dingana tokony hataonao, ary koa ny antontan-taratasy sy ny vidiny.
Sarintany Game of Thrones
Hodinihinay ny sasany amin'ireo toerana manan-danja indrindra amin'ny Game of Thrones. Toerana tsy manam-paharoa hitantsika nandritra ny andiany.
Fantaro izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanavaozana ny pasipaoronao. Avy aiza no hanaovana azy, ny antontan-taratasy atolotra sy ny vidiny aloa.
Bran Castle na ny Dracula's Castle dia iray amin'ireo fijanonana tsy maintsy atao any Romania. Toerana misy hatsarana sy angano be ao ambadika ao.
Aiza no hitetezana ny volana septambra
Aza adino ity safidin'ny toerana itetezana anao ity amin'ny volana septambra izay hahagaga anao. Hahita toerana tsy manam-paharoa hankafizinao ianao amin'ity volana ity!
Nanjary hevitra lehibe ny fitsangatsanganana tsy misy valizy. Raha mbola tsy resy lahatra ianao dia tadiavo ny tombony lehibe sy ny antony mahatonga ny dia mahafinaritra kokoa.
Aiza no hahitana ireo Jiro Avaratra
Raha te hahalala ianao hoe aiza no hahitana ireo hazavan'ny Avaratra, avelanay ianao miaraka amin'ireo teboka tsara indrindra ahafahanao mankafy an'io tranga voajanahary tsara tarehy io.
Ny tempolin'i Ayutthaya dia iray amin'ireo fitsangantsanganana tena ilaina mba hankafizanao ny Park an-tantara izay feno tempoly, lapa ary sary sokitra izay mamiratra sy mifandray amin'ny fotoana hafa. Raha mikasa ny hitsidika an'i Thailand ianao dia tsy afaka manadino ity toerana ity.
Raha mandeha any ivelany ianao: Mandehandeha na SIM mialoha avy amin'ny firenena notsidihinao?
Angamba fanontaniana iray izay miteraka fisalasalana maro. Samy SIM roaming na prepaid dia safidy roa rehefa mandeha dia afaka mifandray amin'ny Internet. Androany dia hitanay ny tsara sy ny ratsy indrindra amin'ny safidy roa mba hahafahanao manapa-kevitra amin'ny mora indrindra sy ny mety indrindra aminao.
Fampiharana sy kojakoja tsy azo adino amin'ny findainao rehefa mandeha lavitra ianao
Hodinihinay ireo fampiharana sy kojakoja ilain'ny findainao rehefa mandeha izahay. Fomba iray hitondrana izay rehetra ilainao tsy hanan-ahiahy, ary afaka mankafy ireo andro fitsaharana sahaza isika. Jereo hoe inona no ilainao hatao!
Raha ny nosy Fiji no tanjonao manaraka, dia homenay anao ny fampahalalana rehetra ilainao hahatongavana amin'izany dia mihoatra ny tsy hay hadinoina. Manomboka amin'ny zavatra tokony hatao any amin'ireo nosy ireo, hatramin'ny vidiny sy ireo angon-drakitra mahaliana izay ilaintsika fatratra. Manangona entana ve isika?
Tanna, ilay nosy mistery ao amin'ny Oseana Pasifika
Tanna dia any amin'ny Oseana Pasifika. Iray amin'ireo nosy maro mandrafitra ny nosin'i Vanuatu. Saingy tsy isalasalana fa manana quirks lehibe ho hita izy. Momba ilay nosy mistery nolazain'i Jules Verne tamintsika tamin'io fotoana io. Te hiditra amin'izany ve ianao?
Inona no azoko entina ao anaty valizy?
Rehefa tsy te hiandry andalana lava hanamarinana isika dia lasa mpiara-miasa akaiky indrindra aminay ny valizy. Fa eny, tsy maintsy mampahafantatra tsara ny tenantsika tsara momba izay azontsika entina sy izay tsy isika isika. Ka izao dia hamafana ireo fisalasalana rehetra manelingelina ny lohanao ireo.
Ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany
Asehonay aminao ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany izay ahitanao tontolo miavaka sy majika, voahodidin'ny natiora ary mazava ho azy, hatsaran-tarehy maro. Efa tafiditra tao amin'ireo iray noresahinay ireo ve ianao? Mendrika ankafizin'izy ireo indray mandeha mandritra ny androm-piainany.
Mandehandeha mamaky ny iray amin'ireo tany efitra malaza indrindra amin'ny efijery lehibe izahay. Wadi Rum no toerana filalaovana sarimihetsika toa an'i "Lawrence of Arabia" ary manafina zava-miafina sy te hahafanta-javatra maro azo iainana, indray mandeha amin'ny fiainana iray manontolo.
Fantaro ny fomba ahafahanao mandeha maimaim-poana amin'ny maha-mpilatsaka an-tsitrapo anao manerantany. Traikefa manankarena be ho anao sy ny hoavinao.
Discover Leuven: fifangaroan'ny fomban-drazana, kolontsaina ary fiainana maro. Fantsona sy tsangambato feno hatsarana hitanao amin'ny fitsangatsanganana.
Jereo ny toeram-pitrandrahana sira izay fantatra koa amin'ny hoe katedraly masin'ny tany. Any amin'ny tanàna poloney, Wieliczka izy ireo.
Inona no ho hita any Bratislava
Aza adino izay ho hitanao ao Bratislava. Ny renivohitr'i Slowakia dia manana zoro maro hanehoana ny fihaonan'ny zavakanto amin'ny angano sy ny tantara.
Raha te hahafantatra ny fomba handaminana ny dia manerana izao tontolo izao ianao dia aza hadino ny torohevitra tsara indrindra momba ny fiomanana avelanay anao anio.
Torohevitra momba ny dia mora
Avelanay anao ny torohevitra tsara indrindra handehanana mora vidy. Dingana kely tokony horaisina raha te-hihary mihoatra ny azontsika eritreretina isika.
Aza adino izay ho hitanao any Malta. Fitsidihana ireo nosy lehibe misy azy, ary koa ireo tanànany feno harena be arafitrano sy kolontsaina
Backpacker's Guide mankany Thailand
Raha mandeha toy ny backpacker mankany Thailand ianao dia aza adino ny mpitari-dalana anay izay ampianarinay anao izay hoentinao, ny fomba fitsangatsanganana, ny fifanakalozana vola ary ny fika hafa
Nosy Sal, any Cape Verde: ny kolontsain'ny No Stress
Ny nosy Sal, ao Cape Verde, dia paradisa iray fandroana iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto Afrika ary onenan'ireo olona mafana sy mandray olona.
Fahasamihafana eo amin'ny hotely an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra
Ireo izay tsy mahalala izay fizahan-tany ambanivohitra matetika dia manontany tena hoe inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampiantranoana ambanivohitra ...